Faysal anigu lama yaabani haduu arimaha Somaliland daayo oo kuwa Somaliyana dhex muquurto waayo” Siyaasi Cali Guray | Mandheera News
Hargeysa(Mandheeranews)- Siyaasi Cali Guray, ayaa ka Hadlay Shir uu Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe kaga qaybgalay Kenya, waxanu sheegay in aanay wax layaab ah lahayn Faysal Cali Waraabe inuu ka qaybgalo shir Somali weyn, sidoo kale waxa uu ka Hadlay asxaabta Somaliland iyo Doorashooyinka iyo weliba nidaamka Dimuquraadiyaded ee ka hana-qaday Somaliland. Sidaasna waxa uu ku sheegay qoraal kooban oo u ku baahiyey bartiisa Facebook kasoo u dhigan sidan.
“CIIDAN UMA MAQNA CEELNA UMA QODNA
Faysal anigu lama yaabani haduu arimaha Somaliland daaye uu kuwa Somaliyana dhex muquurito waayo waxan ogahay dhinaca Somaliland in aanu xumaan uga jeedin. Ta kale Faysal waynu naqaan mana aha wax cusub oo aan hore loogu aqoon jirin in uu dhex muquurto arimaha Somalia gaar ahaan xiliyada ay doorashadoodu saw dhawaato.
Anigu siyaasiyiinta Somaliland ee Xukuumadda, xisbiyada iyo golayaasha Baarlamanka ka tirsan dhinaca siyaasadda qabyada Somaliland u taala oo dhan waxan u arkaa tu ay iyagu hore u baylahiyeen. Sida muuqata wax xal ah oo Somaliland ay ku caymin karana ma hayaan. Ilaa hadda iska dhaaf mustaqbalka fog eh xataa kan dhaw ayaa mugdi ah wixii ka dambeeya doorashadan la isku sidkay hadiiba ay qabsoonto hadii Alleh idmo kal damb. Anigu inta ugu fog ee ii muuqan kartaa waa intaa.
Hadii run la doonayo badbaadinta qarankan iyo nidaamkiisa xisbiyada badan iyo doorashooyinkeeda tooska ah oo gebi ahaanba geesi socodka qaran dhiskeeda u ah udub waa in sedex su’aalood marka hore loo helaa jawaabo cadcad oo aan wax madmadow ahi ku jirin. Sadexda sua’aalood waxay yihiin kuwan:
Sadexdan xisbi marka ay dhamaato mudadoodu muwaadiniinta Somaliland xaq sharci waxay u yeelanayaan in ay faran karaan ururo siyaasadeed. Maxaa u damaanad ah in xaqaa sharci loo ogol yahay inay helayaan?
Sua’aasha labaad hadii doorashada Wakiiladu ay qabsoonto 2022 sharci ahaan sida loo dhigay Golaha Guurtidana waa in la bedelo oo la helo gole cusub ama doorasho ha ku yimaadaan ama xulasho ama hadii xal kale la waayo sidii uu ku yimi Golaha hadda fadhiyaaba eh. Ma la helayaa mise maya?
Sua’aasha sadexaad Bisha November 2022 oo hadda laba sanadood inaga xigaan qorshaha Madaxwaynuhu ma yahay in la qabto doorashadii Madaxtooyada oo uu xaq u leeyahay in uu tartami karo?
Hadal isagaa iska badane sadexdaa sua’aalood ma jawaab cad oo run ah oo aan been ahayn loo hel inta aanay qabsoomin doorashada Wakiilada, iyo Golayaasha Degaamadu mise loo heliwaa oo ah waan la doonayn in laga jawaabo. Hadii jawaabo loo helo waa sax mustaqbalka Somalilandna werwer ma leh. Hadii kale Somaliland waxa loo degay jar khatar ah iyo shirqool maleegan oo lagu doonayo in lagu mijo-xaabiyo majarihii hogaanka talada dalka oo weliba qori caaradii lagu meel marsado talo gaar ah oo cid gaar ahi ku doonayso inay ku meel marsato dan gaar ah oo ay leedahay ama ha u suurogasho ama ha la iska dhiciyo oo ha ku hungowdo eh.
Hadaba sadexdan sua’aalood cid kale daaye Madaxwaynaha xilka hayaa ma ka jawaabi karaa inta aanay dhicin doorashada kal dambe la filayo inay qabsoonto mise dheg uma laha oo waanu doonayn?
Somaliland anigu waan u baqayaa oo si aanan weligay hore ugu baqan ayaan maanta ugu baqayaa waayo waxan arkayaa mustaqbalkii Somaliland oo ku socda الى المجهول hadana ceel u qodan iyo ciidan u maqan midna ma arko. Taasina waxay fursad u noqon kartaa Somalia si ay ugu noqotaba.